Canada's New Tourism Vision unveiled at Rendez-vous Canada | Canada Travel News
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Canada Travel News • Vaovao momba ny dia an-kolontsaina • Tombontsoa fampiasam-bola • Vaovao momba ny indostria fihaonana • Olona manao vaovao • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana
Naseho tao amin'ny Rendez-vous Canada ny fahitana fizahan-tany vaovao any Canada
Home » Lahatsoratra » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Canada Travel News » Naseho tao amin'ny Rendez-vous Canada ny fahitana fizahan-tany vaovao any Canada
Kanada dia mifaninana amin'ny toerana avo indrindra eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany manerantany. Ny fahazoana antoka fa maro ny mpizahatany iraisam-pirenena misafidy an'i Canada dia hidika ho asa bebe kokoa ho an'ny tanora kanadiana ary ho fampiroboroboana ho an'ireo orinasa kely any amin'ny faritra rehetra ao amin'ny firenena.
Ny taona lasa dia rakitsoratra iray ho an'ny fizahan-tany any Kanada, ary miaraka amin'ny vinan'ny fizahan-tany vaovao any Kanada, ny Governemanta Canada dia manana drafitra mazava hananganana an'ity fahombiazana ity, hanohy hampitombo ny sehatry ny fizahan-tany ary hamorona asa mandritra ny taona maro. Ity no hafatra nampitain'ny Honorable Bardish Chagger, mpitarika ny governemanta ao amin'ny House of Commons ary ny minisitry ny orinasa kely sy ny fizahan-tany, nandritra ny famoahany ny vinan'ny fizahan-tany vaovao any Canada tao amin'ny lahatenin'ny fiaraha-misakafo tamin'ny Rendez-vous Canada.
Ny New Vision Vision dia manolo-tena handray andraikitra amin'ny laharam-pahamehana 20. Manokana, ny drafitra dia hampiasa vola amin'ny marketing matanjaka sy maharitra kokoa, handamina ireo olana mifandraika amin'ny fitsangatsanganana sy ao amin'ny firenena, ary hanohana ireo orinasam-pizahan-tany sy mpandraharaha kanadiana rehefa miasa izy ireo hanatsara ny tolotra ataon'izy ireo miaraka amina vokatra sy serivisy vaovao.
Nanangana tranokala ihany koa ny minisitra Chagger hanehoana ny fahitana fizahan-tany vaovao any Canada, manome ny mpandraharaha fizahan-tany kanadiana sy mpandraharaha vaovao momba ny fizahan-tany any Kanada. Ity hetsika ity dia manohana ny telo amin'ireo fanoloran-tena amin'ny fahitana:
• Ny fampitomboana ny isan'ny mpizahatany iraisam-pirenena mankany Kanada 30 isan-jato hatramin'ny 2021.
• Fanindroany ny isan'ireo mpitsidika sinoa amin'ity taona ity.
• Fametrahana toerana an'i Canada hifaninana amin'ny laharana 10 ambony amin'ny 2025.
“Mahafinaritra tokoa ny miverina eto Rendez-vous Canada ary mahita ny isan'ireo olona nanatrika. Ankafiziko foana ny fihaonana amin'ireo olona miasa mafy mandray ny mpitsidika ny firenentsika ary manampy amin'ny fampiroboroboana ny fizahan-tany avy amin'ny morontsiraka ka hatrany amorontsiraka. Ilaina ny fizahan-tany ho an'ny asa an-tsekoly antonony marobe amin'ny vondrom-piarahamonina manerana ny firenena, manohana orinasa 200,000 1.7 sy asa XNUMX tapitrisa. Amin'ny alàlan'ny vina fizahan-tany vaovaon'ny governemanta avy amin'ny governemantanay, dia manana drafitra mazava izahay hanorina an'io fahombiazana io ary hanehoana ireo endritsika mahafinaritra, traikefa mahatalanjona ary kolontsaina tokana ho an'izao tontolo izao. ”
- The Honorable Bardish Chagger, mpitarika ny governemanta ao amin'ny House of Commons ary minisitry ny orinasa kely sy ny fizahantany
“Vaovao tsara ity! Fotoana mampientanentana ho an'ny indostrian'ny fizahantany ity, ary ny fanohanan'ny tompon-tany dia zava-dehibe amin'ny fahombiazantsika miaraka hatrany. ”
- David Goldstein, Filoham-pirenena ary CEO, Destination Canada
“Isan-taona, Rendez-vous Canada dia mampiseho amin'izao tontolo izao ny tanjaka, ny fahasamihafana ary ny fahafahan'ny orinasantsika. Ny firotsahana an-tsoratra amin'ity taona ity dia mampiseho amin'izao tontolo izao fa ny indostrian'ny fizahantany any Canada dia vonona handray mpitsidika bebe kokoa, fitomboana matanjaka ary asa bebe kokoa. Ny fananana ny Governemanta Canada ho mpiara-miasa hanohanana ny fitomboana dia tsy maintsy ilaina mba hahazoana antoka ny fitomboana maharitra. Isaorana manokana ny Minisitra Chagger noho ny fitarihany sy ny fanohanany. Ny New Vision Vision an'ny Kanada dia hanampy amin'ny fampisondrotana ny mombamomba an'i Canada any ivelany ary mandroso ny asa manerana ny governemanta sy ny hetsika misy dikany eto an-trano. Ny tanjona azo refesina amin'ny Vision dia hanome tanjona kendrena mazava hiara-hiasa amin'ny fitomboan'ny indostria sy ny toekarena kanadianina. ”
- Charlotte Bell, Filoha sy Tale Jeneraly, Fikambanan'ny Indostrian'ny Fizahan-tany any Kanada
• Rendez-vous Canada no tsena fizahan-tany iraisampirenena voalohany any Canada izay tarihin'i Destination Canada ary iaraha-mitantana ny Fikambanan'ny Fizahan-tany any Kanada.
• Rendez-vous Canada dia atao any amin'ny tanàna kanadiana hafa isan-taona. Ny fanontana amin'ity taona ity, izay atao any Calgary, dia hanangona mpividy iraisam-pirenena 1,800 sy mpivarotra kanadiana haneho sy hampiroborobo ny vokatra sy serivisy fizahantany kanadiana amin'ny tsena ivelany.
• Ny indostrian'ny fizahantany any Canada dia manohana asa 1.7 tapitrisa manerana ny firenena.
• Ny tetibola 2017 dia nanambara fampiasam-bola lehibe eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany any Kanada:
o Mametraka maharitra ny $ 37.5 tapitrisa isan-taona amin'ny famatsiam-bola vonjimaika izay natolotra ny Destination Canada.
o Manome 8.6 tapitrisa dolara ho an'ny Vazimba teratany sy ny faritra avaratra any Canada hanohanana ny fampandrosoana ny indostrian'ny fizahan-tany vazimba teratany tokana sy tena izy.
o Manome $ 13.6 tapitrisa mandritra ny dimy taona, ary $ 2.7 tapitrisa isan-taona aorian'izay, ho an'ny Statistics Canada hanitatra ny angon-drakitra fizahan-tany.